Haweeney qashinka caagadaha iyo bacaha ka sameysa bulukeeti awood badan | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Haweeney qashinka caagadaha iyo bacaha ka sameysa bulukeeti awood badan
Haweeney qashinka caagadaha iyo bacaha ka sameysa bulukeeti awood badan
Nzambi Matee oo ah haweeney qashinka ka sameysa bulukeeti
Nairobi (Halqaran.com) – Nzambi Matee oo ah haweeney u dhalatay Kenya waxey dadaalkeeda ugu badan ku bixisaa sidii loo soo afjari lahaa dhibaatada wasaqeynta caagadaha iyo bacaha ee ka jirta dalkeeda.
Shaqadeeda waa in ay dib u hagaajiso haraadiga bacaha la tuuro, isku daygeedaas waxaa ka soo baxday natiijo sare oo xitaa aysan ku guuleysan warshadaha wax soo saarka ee dunida ka jira.
Warshadeeda oo ku taalla Nairobi waxay qashinka bacaha ka soo saartaa bulukeeti awood badan, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Reuters.
“Wax soo saarkaanaga wuxuu shan illaa toddobo jeer ka awood badan yahay shubka.” Sidaas waxaa tiri Nzambi Matee.
Warshadeeda oo lagu magacaabo Gjenge Makers waxay qashinka ka soo uruursataa haraadiga warshadaha wax soo saarka kaddib waxay u rogtaa wax soo saar faa’iido leh.